Ungabathola Kanjani Abalandeli Bakwenzela Futhi Babelane Ngokuqukethwe | Martech Zone
Ungabathola Kanjani Abalandeli Bakwenzela Futhi Babelane Ngokuqukethwe
NgoMsombuluko, Juni 9, 2014 NgeSonto, ngoJuni 8, i-2014 Douglas Karr
Sabelane nje kanjani I-LinkedIn ibisebenzisa ukuxoxa izindaba nezindaba zomsebenzisi ukukhulisa imizamo yokuthengisa yomkhiqizo futhi ziveze le infographic evela kuNeil Patel - Ungabathola Kanjani Abalandeli Bakwenzela Futhi Babelane Ngokuqukethwe. I-infographic ihamba ngazo zombili izinzuzo nobufakazi bamasu wokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi (UGC).
Okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi ngeke nje konge imali, kepha kuzokukhiqizela nemali engenayo. Lapho uthola abalandeli bakho bezibandakanya nebhizinisi lakho, ukuthembela ngokwengeziwe ozokwakha, futhi ukufinyelela kwakho kuzoba kukhulu. Uzobona nezinzuzo ze-SEO. Ukukukhombisa ukuthi ungazibandakanya kanjani izivakashi zakho ukuze ziqale ukudala nokwabelana ngokuqukethwe kwakho, iQuicksprout ihlanganise i-infographic echaza inqubo.
Nikeza ngamathuluzi futhi ufundise abalandeli bakho ukuthi bangabhala kanjani, bahlanganyele izithombe namavidiyo bese kuthi abasebenzi bakho bagxile ekwenziweni kahle, balungise kahle indaba, futhi bakhiqize okuqukethwe okuthuthukisa umkhiqizo wakho! Ngenkathi inqubo idinga ukwenziwa kabusha kwenqubo yakho yokumaketha okuqukethwe, ekugcineni kunokonga (nezimanga eziningi) ukusebenzisa okuqukethwe ngumsebenzisi wakho ukukhipha igama!
Tags: ugcokuqukethwe okwenziwe umsebenzisiizithombe ezenziwe ngumsebenzisiokwenziwe ngumsebenzisiividiyo eyenziwe ngumsebenzisi